Xasan Shiikh: Madaxweyne Farmaajo 4 sano wax kuma darsan karo! - Video - Horseed Media • Somali News
October 12, 2019Somali News
Xasan Shiikh: Madaxweyne Farmaajo 4 sano wax kuma darsan karo! – Video
Madaxweynihii hore ee Dowlada Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo kamid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeediyey xafladii caleemo-saarka Madaxweynaha Jubaland ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee jira, isagoo baaq u diray Madaxweyne Maxamed Farmaajo oo uu ugu baaqay inuu wakhtiga u haray uga faaÔÇÖiideysto inuu wadahadal la galo dadka ay iska soo horjeedaan.
ÔÇ£ÔÇªWaxaan leenahay Madaxweyne Caqliga hasoo noqdo, dadka horey ayey kuula soo shaqeeyeen, weli talo iyo raÔÇÖayi ayaan qabnaa, wakhtiga kuu haray uga faaÔÇÖiideyso inaad dadka la hadasho oo ummada la fadhiisatoÔÇªÔÇØ ayuu yiri Xasan Shiikh oo sheegay in dalka lagu wadi karo wadatashi.
Xasan Shiikh ayaa sheegay inaysan marnaba dhici doonin in wakhti dheeraad ah xukuumada ku darsato.
Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed oo uu sheegay illaa iyo hada dadkii lagu dilay inaan la xalin.
Xaalada Galmudug ayuu sheegay in ay hada ku sugan tahay meel adag, wuxuuna sheegay in Guddiga Dowlada Federaalka sameysay uu yahay mid si khaldan loo dhisay oo ay ku jiraan xubno kamid ah shaqaalaha Xukuumada Federaalka taasi oo ka horimaaneysa Dastuurka dalka.
ÔÇ£ÔÇªDowlada Federaalka Meesha ugu hooseysa oo Sharciga ah ayey ku tumaneysaa, war ka joog baanu leenahayÔÇª.ÔÇØ Ayuu yiri Xasan Shiikh
Dhinaca kale wuxuu Xasan Shiikh si adag uga hadlay arimaha Dhaqaalaha maqan oo uu dhawaan shaaciyey hanti-dhawrka Qaranka, isagoo sheegay in laga xisaabtami doono xoolaha maqan.
Xaalada Muqdisho oo uu ka hadlay ayuu sheegay in Dowlada Federaalka wax ka bedasho xaalada Caasimada iyo wadooyinka xiran.
ÔÇ£ÔÇªAwal Dhagaxaan baa wadooyinka ku xirnaa hada laakiin waxaaba la keenay Ganjeelo in wadada lagu xiro, dadka sida halaga daayoÔÇªÔÇØ ayuu yiri Madaxweynihii hore
Wuxuu sidoo kale amaanay qaabka ay u dhacday Doorashadii Jubaland oo uu sheegay inay u dhacday sidii ugu macquulsaneyd oo loo sameyn karay, isagoo ugu baaqay Madaxweynaha la doortay ee Jubaland Axmed Madoobe inuu sii wado xalinta khilaafaadka ka dhashay doorashada.